Elands Bay, Western Cape, eMzantsi Afrika
Indlu yodaka sinombuki zindwendwe onguCatherine
Le ndlu yaselunxwemeni eyilwe yiArchitect eyakhiwe ngeebhali zendiza ibonelela ngeendawo eziphangaleleyo, ezitofotofo, ngendawo yokuziphekela e-Elands Bay, kuNxweme oluseNtshona, eMzantsi Afrika.
Le ndlu yeendiza, iyilwe nguMatthew Beatty, kwaye yakhiwe ngabakwaBurger ibonisa ukuphumla. Iindonga ezishinyeneyo zebhali zikhusela kwimimoya engapheliyo, zigcina amagumbi epholile ehlotyeni elomileyo elitshisayo kwaye lishushu ebusika obubandayo. Ucango olutyibilikayo lweteki kunye nefestile esongwayo etyibilikayo ivula indawo yokuhlala / yasekhitshini kwiyadi yenkundla ezolileyo. Indawo yokulala idityaniswe nesimbo saseMntla Afrika “sokuzipholela” kwindawo esemazantsi kunye nendlu yokuhlambela yangaphandle emantla. Uyilo lwangoku luthambile ngokusetyenziswa kwezixhobo ezilula kunye nezixhobo zokwakha zendalo, ukudala indawo yokugqibela yokuphumla.
“Unxweme olusentshona lufana noqhagamshelo lwe-intanethi olunamandla aphezulu emphefumlweni wakho. Kusendle, kurhabaxa, kuyavuthuza kwaye akukhathazwanga kwaye naliphi na ixesha elichithwe apha liya kuhlala kumaziko akho okuziva ulungile. " Coast to Coast Guide
Ubungqina busekho ubomi ukusuka kwiminyaka engama-20000 eyadlulayo kule ndawo. Abantu behlabathi lonke basatsalwa bubungqwabalala nobuhle. Sula ingqondo yakho kunxweme olungenasiphelo, ulawulwe yimigca yokudumba engenasiphako esonga echwebeni kwaye yaphule ngokugqibeleleyo inqaku lesandla sasekhohlo, uchithe iiyure ubukele uluhlu olumangalisayo lwezilwanyana ezanyisayo kunye neentaka ezisecaleni kweVerloren vlei okanye uzipholele ngokuhlwa. ye "brandy kunye necoke" kunye namafama eetapile asekuhlaleni kwihotele edume kakubi e-Elands Bay.
Izitshixo zendlu zifumaneka ku-Irene, ohlala ecaleni kwesikhululo samapolisa e-Elands Bay (072 299 6008)
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo, nceda ufowunele uCath (082 412 3073) okanye uMark (072 130 1755).
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Elands Bay